Maali: Dhowr kun oo qof ayaa isugu soo baxay Bamako si ay u taageeraan ciidanka - JeuneAfrique.com - KU SOO DHAWEYN
ACCUEIL » SIYAASADDA »Mali: Kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay Bamako si ay u taageeraan ciidanka - JeuneAfrique.com
Inta u dhaxaysa 3 500 iyo 5 000 dadku waxay soo uruuriyeen jimcaha 8 November ee Bamako si ay u muujiyaan taageeradooda ciidanka qaranka, oo ay ku dhufteen laba weerar oo dilaa ah bil gudaheed isla markaana ay soo food saareen shaki laga qabo cadaadiska argagixisada.
"Waan taageersanahay ciidamadeyda", "Ciidanka Mali waxay u dagaallamayaan sidii ay dalka u badbaadin lahaayeen", ama "Waa inaan siinnaa aaladda ragga ee lagama maarmaanka u ah ragga", miyaan akhrin karnaa baararka ama baastada ololahan ololaha ururada bulshada rayidka ah.
Waxay ku labisan yihiin madow, dhowr carmallo ah oo askar ah ayaa lagu dilay dagaal ay la galeen mudaaharaadyo kuwaas oo ahaa 5 000 sida ay sheegeen qabanqaabiyeyaasha, iyo 3 500 sida laga soo xigtay booliiska.
Ciidamada Mali waxay lumiyeen toddobaadyo gudahood boqol askari labadoodaba weeraradii jihaadiyiinta ee ugu halista badnaa ee ay soo marta sannado.
Ciidankii ayaa kala kulmay shaki
Dib-u-dhacyadan iyo xaaladda sii xumaaneysa ee amniga ayaa sii xoojisay su'aalaha ku saabsan awoodda ciidan ee ay kula tacaali karaan falalka jihaadka iyo qalalaasaha kale ee waddanku ugaarsanayay tan iyo 2012 oo ay ku dhinteen kumanaan qof, shicib iyo dagaalyahanno. .
Waxaan rabnaa inaan siino ciidanka qalab wanaagsan. Nimankeennu waxay doorteen shaqada si dhakhso leh u keenta geeri. Laakiin waa inaan ku difaacno dhulka iyagoo wata qalab muujinaya, ayuu yidhi Aïcha Diakité, 33, oo ninkeedii askariga ahaa uu ku dhintey mid ka mid ah laba weerar oo dhowaan dhacay, Boulkessy, oo u dhaw Burkina Faso.
Mucaaradka joogitaanka Faransiiska iyo Qaramada Midoobay
Dhacdooyinka usbuucyadii la soo dhaafay ayaa iyaguna muujiyey tibaaxaha diidmada ciidamada Faransiiska iyo UN-ka jooga Maali. Qeyb kamid ah dadka mudaaharaadaya ayaa codsaday in la tago jimcaha.
Waxaan codsaneynaa bixitaanka UN-ka iyo ciidamada Faransiiska. Haddii aysan wax ka qaban karin argagixisada, halkan boos kuma lahan. Waxaan weydiisanaynaa Russia inay yimaadaan, ”ayuu yiri Ousmane Coulibaly, 24, arday bilaa shaqo ah oo qalin-jabiyay.
"Barkhane, Minusma, cad! ", Waxaan ka aqrinay boodhadhka tilmaamaya ciidamada Faransiiska iyo kuwa UN-ka.
Guinea-Bissau: Raiisel wasaaraha cusub ee lagu muransan yahay ayaa is casilay, halka ECOWAS ay ku celineyso taageerada ay u hayso dowladda Gomes - JeuneAfrique.com